Amathumbu - yigama ezivamile ezindaweni eziningana kuleli pheshana emathunjini, ngamunye edlala indima ebalulekile ukugaya ukudla. imisebenzi yaso zihlanganisa ukuwohloka ukudla by enzyme ukuba izinhlayiya ezincane kunazo. Ngakho-ke, iyiphi ukuvuvukala, kungakhathaliseki ukuthi ngasiphi isizathu, igcwele eziyingozi. Ukudla kanye wamathumbu ukuvuvukala linendima ebalulekile.
Amathumbu e imisebenzi yabo bahlukaniswa baba yizigaba ezingu ezimbili - ezinkulu nezincane, ababizwa ngokuvumelana ukujiya yabo. Emathunjini amancane ukudla uchotshoziwe tincenye ezincane, okuyinto ke ubole ukubunjwa amakhemikhali. Iphinde kwenzeka futhi ukumuncwa kwezakhi emzimbeni. I ikholoni Ukwakheka kwezitho imfucuza ukugaya kanye ukumuncwa yamanzi nodonga lwawo. Ithumbu buhlobene eduze zonke izitho okuqondene isimiso sokugaya ukudla bungene. Isibonelo, therefrom kuya esiswini, hydrochloric acid Bile - emathunjini. He is ahileleke ukukhiqizwa kwama-hormone Ukuvikelwa kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni. Buciko imisebenzi eminingi ebalulekile, wamathumbu kudinga nokuqikelela. izinqubo okuvuthayo kungashiwo isebenze izingxenye ezahlukene. Ithumbu elincane has izigaba ezintathu, ngamunye okuyinto wenza imisebenzi ethile. Lapho ukungasebenzi noma yisiphi sazo kuba abavusa emathunjini amancane. Ukudla ekwelapheni izifo ezihlobene nale ukuvuvukala, inikezwa udokotela futhi imenyu ukuthi ihlanganisa pureed iphalishi, amasobho ukukhanya, futhi okubaluleke - yokuhlukanisa ukudla izingxenyana ezincane izikhathi eziningana ngosuku.
Ukuvuvukala duodenum noma duodenitis, ngokuvamile kwenzeka ngenxa izinto engena phakathi asidi eliphezulu esiswini, lapho ona le mucosa. I duodenum imfushane ngokwanele, kuba emathunjini, lapho ukudla icutshungulwe yi-wokugaya ukudla umpe pancreatic umdlavuza, ngakho ubizwa kuhlobane ngokuqondile ukuvuvukala izifo ezihlukahlukene esiswini noma amanyikwe. Kulezi zimo, parallel ekwelapheni duodenitis kufanele kwenziwe kanye nokwelashwa nezinye izifo. ukusetshenziswa ngemfanelo duodenum nakho kubalulekile ngoba kudedela hormone ukuze isimiso sokugaya ukudla bungene. Ukudla ukuvuvukala wamathumbu isifo kusiza imisebenzi womnyango.
Ngezinye izikhathi kukhona duodenitis yesibili, lapho ukudla ezitholwe duodenum, awakwazi ukudlulela ku amathumbu ngenxa ukuvuvukala noma nezibazi. Ngokuvamile lokhu kwenzeka emva kokuhlinzwa emathunjini. Ingozi yalesi sifo wukuthi esigabeni sokuqala sidlule waphawuleka ngokuphelele. Njengoba izimpawu isifo njengesifo sohudo, kwesinye isikhathi igazi, noma ukuqunjelwa, ezinzima ubuhlungu esiswini kanye nendlala. Duodenitis nemiphumela enqala kungaba perforation emathunjini bese ukopha zangaphakathi. Uma kungelashwa, ifomu njalo isitho yoma kungenzeka.
duodenitis Ukwelashwa incike kundlela futhi isigaba yezimbangela isifo, yavusa. Kunoma ikuphi, ukwelashwa kufanele sihambisane ukudla okuqinile. Isimiso salo ukuthi ukudla okuphekiwe akusho obungamcasula ulwelwesi lwesisu, kwenze duodenum. Ngakho, ke kufanele lizwakale linemfudumalo, kodwa hhayi ashisayo, wagcoba, okungezona oyingozi futhi unsalted. iphalishi Axazululiwe, isobho, okumuncu, izithelo ezithambile. Imifino wabhaka ezinhle. Kuye ifomu izimbangela zezifo izincomo wezokudla zingahluka. Umbuzo ka onjani yokudla ukuvuvukala wamathumbu isifo zidinga isiguli, zingaxazululwa kuphela udokotela ukuba khona.
Jejunum ungase ube ubude ngamamitha amabili. Umsebenzi Its ukuthuthukisa enzyme kudingekile ukuba luguqulwe okwengeziwe compounds eziyinkimbinkimbi eziphilayo zibe izinto ezilula okuyizinto acid okunamafutha, amino acid, ushukela, bese bengena ekusakazeni igazi. Ukuvuvukala jejunum ngokuthi eyunit. Njengoba umsebenzi we jejunum kufaka nokuhlinzeka umzimba izakhi, malabsorption kungaholela Ukuwohloka. Ukwelashwa lesi sifo ngokuvamile kwenziwa esibhedlela futhi kudinga ukuhambisana saziso nge engashiyi dietetics Ukudla.
ukuvuvukala olunamandla noma ezingamahlalakhona zengxenye yesithathu emathunjini amancane - ileum - ngokuthi ileitis. Lena ngempela isifo ovamile ukuthi kwenzeka kaningi kakhulu abaseminyakeni yobudala ephakathi kwengu iminyaka 20-40. Ifomu acute ngokuvamile nobuntu izingane kubangelwa amagciwane noma ama-virus. Ukuba yinkimbinkimbi kwayo lesi sifo ukuthi akunakwenzeka lokwenza ukuxilongwa nge amasu endoscopic, okubangela amaphutha ukuxilongwa.
Ukwelashwa lesi sifo ngokuvamile eyenziwa lapho esibhedlela, futhi ukwelashwa kuhambisana namandla mnene, ngaphandle ukudla oyingozi noma ethosiwe. Izingane contraindicated ushokoledi, ukudla kanye ukuvuvukala emathunjini e omdala akufaki utshwala, ukubhema. Imenyu kuhlanganisa imikhiqizo yobisi, amavithamini, amaphrotheni, astringents. okulinganiselwe fibre.
Ithumbu elikhulu nalo kuhlukaniswe kathathu nge isimo sawo futhi imisebenzi.
I cecum ungowokuqala umnyango kwakhe, kungukungcola isithasiselo - isithasiselo saleli Bhayibheli. Umsebenzi cecum kuyinto ukuze uyothuthukisa ukugaya ukudla, okuyinto eqhekeza main wathola emathunjini amancane futhi ukusuka lapho engena cecum. Lapha esikuthola uketshezi ngokweqile. Kubalulekile kakhulu futhi indima isithasiselo - kunika isivikelo kwamagciwane abangela izifo. Ngaphezu kwalokho, i-appendix eveza nenzuzo microflora emathunjini.
Ukuze inflammations cecum kukhona typhlitis (ukuvuvukala izicubu zakhe), futhi-appendicitis. ukwelashwa tiflita kudinga ukwelashwa ngemithi elwa namagciwane, embhedeni ukuphumula futhi uhlobo olukhethekile lokudla. Ukudla e ukuvuvukala ikholoni ezinqunyiwe ngamunye kuye ngokuthi isifo. Ukudla kufanele uzilungiselele ambalwa. Isimo main - kufanele Ungabacasuli wamathumbu. jelly ewusizo, okusanhlamvu, ukuqunjelwa - abilisiwe imifino, izithelo, kanye nesifo sohudo - omhlophe, isinkwa kancane omisiwe, benomhluzi inyama ebomvu. Izithelo bangacasulana ulwelwesi emathunjini, ngakho sebenzisa lawo lilinganiselwe kakhulu. Ukudla ukuvuvukala wamathumbu isifo abadala kuhlukile Ukudla kwengane, okuyinto lihlotshaniswa inkambo ehlukile lesi sifo.
Enye ukuvuvukala kule cecum esithasiselweni kuyinqubo eziqala occlusion we Isikhala sayo esingaphakathi yemizimba isithasiselo angaphandle, okuyindawo e ingaphakathi yayo iqala kabusha eziphilayo pathogenic, izicubu edema, okuchukuluza ubuhlungu futhi amajaqamba. Ukwelashwa kulesi simo kungaba surgically, kungenjalo wavele appendix kuphakama peritonitis kusuka usongo ekuphileni.
Kukhona ifomu njalo appendicitis, lapho esimisiwe ukwelashwa ngoludala futhi Ukudla ezifanele. Okuvuthayo wamathumbu isifo, izimpawu zazo ukunikeza isithombe esilufifi lesi sifo, kungase kube eyiphutha appendicitis.
I ikholoni kuliragelo ezimpumputhe ngokwayo izingxenyana eziningana. Ukuvuvukala ikholoni kungahle kubangelwe ukudla eziyingozi kanye ukuphila umzimba. Nakuba ingxenye izinto eziyingozi excreted, iningi labo esikuthola odongeni esiswini futhi kuholela izifo ezinzima ezifana nesifo, sigmoid, diverticulosis nabanye. Ukwelashwa Kwenziwa elwa ne-amagciwane anti-viral. Khona-ke isiguli bifidobacteria ebekiwe kanye neminye imithi efanayo. Uma kwakuba khona ukuvuvukala emathunjini, ukudla kanye nokwelashwa zotshwala ezimweni eziningi eyayihambisana Physiotherapy.
Ukuvuvukala ku ingemuva libizwa proctitis. Kwenzeka kaningi kakhulu ngenxa ukuqunjelwa. Isizathu kungaba isifo, umonakalo mechanical, Ukudla okungalungile. Lesi sifo kuyingozi kakhulu, bakheke ngokushesha, ngokungazelelwe ke kwenzeka sebuhlungwini obunzima. Ngakho-ke, uphethwe esifike ngesikhathi futhi elungile kubaluleke kakhulu. ukuphathwa proctitis kuhlanganisa izingxenye ezifana:
ukwelashwa linendima ebalulekile, kodwa akusebenzi ngaphandle ekuhambisaneni izincomo wezokudla. Ukudla ukuvuvukala wamathumbu isifo akufaki acute ukudla okunamafutha, amnandi futhi anosawoti. ukudla okunjalo kunomthelela ukuqunjelwa, okuyinto Akwamukelekile ukubuyisela umsebenzi we ingemuva. Inani izithelo ekudleni kufanele futhi kuncishiswe ingozi umonakalo mechanical kuya mucosa avuvukele. Imenyu kungcono ukufaka inyama osugugile, imikhiqizo yobisi, amasobho ukukhanya futhi abilisiwe kahle ketshezi iphalishi.
izinqubo yokuhlanzeka ihlanganisani ukusetshenziswa enemas futhi emathileyi nge Iziphungo amakhambi ezifana chamomile, ngokulandelana, Yarrow, noma nge potassium permanganate. Beka enema kabili ngosuku, kanti okugeza muhle ukusebenzisa ebusuku. Ngemva ngempumuzo acute ukuvuvukala clysterize ngamafutha ulwandle lalesi sihlahla noma tampons ebusuku.
Ithonya ukucindezeleka ku ukuvuvukala emathunjini
Ucwaningo lubonisa ukuthi cishe u-90% izifo emzimbeni womuntu zenzeka ngenxa yezinkinga amathumbu noma isisu. Ukudla yesimanje iqukethe inqwaba amakhemikhali izithasiselo, amafutha yokufakelwa kanye noshukela. isimiso sokugaya ukudla bungene akakwazi ukubhekana umthamo anjalo ubuthi hhayi isikhathi okukhipha kubo. Ushevu iminyaka zanqwabelana futhi ugxile esiswini futhi odongeni emathunjini, ushevu umzimba wonke, okuyinto iba imbangela izifo eziningi nokungezwani komzimba. Ngakho-ke, ukudla kanye ukuvuvukala amathumbu esiswini kufanele kufake sandla ukuhlanzwa emizimbeni ubuthi.
Pheshana emathunjini liyafana tube okudlula wonke umzimba. Abanye odokotela okuqukethwe emathunjini bese isisu njengoba imvelo bangaphandle maqondana olunye uhlaka izinhlelo. isimiso sokugaya ukudla bungene unikeza wonke umzimba ngokudla nangokwenama amandla, ngakho-ke kubalulekile ukuthi lowo mshini usebenza kahle. Nokho, ngaphandle pathologies organic wokugaya ukudla kubangelwa ukuhluleka e nezikhungo zayo, zikhona izifo obusebenzayo okuhlotshaniswa ukucindezeleka, nakho kwemizwa. Ngemva sindisa ngokomzwelo okunjalo kungabonakala nasemkhakheni wokugaya ukudla uhlelo iziyaluyalu njengesifo sohudo, ubuhlungu esiswini, ngisho ukuhlanza. Livela zalezi zimpawu ngemva ukucindezeleka ngenxa yokuba khona esiswini emathunjini inqwaba yezinzwa, okuyinto pulses zidluliselwa isimiso sokugaya ukudla bungene. Lezi izimpawu futhi zinyamalale ngemva kokususwa ukucindezeleka.
Iqhaza okunomsoco for esiswini impilo
Ngakho, okuvela kuyo izifo wokugaya ukudla bathonywe izinto eziningi, phakathi kwabo kuyinto enkulu amandla uhlelo. Ngakho-ke, noma kunjalo, ekudleni kwabo wamathumbu ukuvuvukala inendima enkulu. Sample imenyu kuhlanganisa Meatless isobho noma isobho ekuqaleni, inyama osugugile mafutha, inhlanzi nemifino abilisiwe ngosuku lwesibili, kanye iphalishi abilisiwe, izithelo iyisitshulu nojeli. Lokubaluleke kakhulu udla ukudla amancane ukuthi kuzovimba amathumbu kusukela sindisa. Ukudla ukuvuvukala wamathumbu isifo abadala kuhilela kwaqedwa idina amahora amathathu noma amane ngaphambi sokulala.
Umzimba womuntu - kuyinto eziyinkimbinkimbi uhlelo self-elawula lapho wonke amangqamuzana kunoma isiphi enze umsebenzi wabo, umsebenzi wabo kahle ehlelekile isekela ukuphila kwakhe. Ithumbu ingenye main izitho wokugaya ukudla, njengoba lihlotshaniswa esigabeni sokugcina okulungisa ukudla.
Komzimba zokuphefumula. Izimpawu, ukwelashwa
Tulips White - spring izimbali engadini yakho